प्रदेश ५ का प्राय: जिल्ला बन्दले प्रभावीत :कहा के के भयो? – कामना डेली
प्रदेश ५ का प्राय: जिल्ला बन्दले प्रभावीत :कहा के के भयो?
On २०७५ फाल्गुन ३०, बिहीबार १४:५२ Last updated Mar 14, 2019
कामना डेली,बुट्वल।सरकारले ‘विप्लव’समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै देश भर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। यद्दपी नेत्रविक्रम चन्द विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव देश भर देखिएको छ। आफ्ना नेता/कार्यकर्ता माथि सरकारबाट भइरहेको धरपकड बन्द गरी पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दै विप्लव समूहले बिहीबार नेपाल बन्द आव्हान गरिएकाे बताईएको छ। बन्दका कारण मुलुकको जनजीवन प्रभावित बनेकाे हो। बिहानैबाट सवारी साधन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा देशभरिको जनजीवन प्रभावित भएको छ । स्कुल, कलेज र बजार समेत बन्द रहेका छन्।विप्लवका कार्यकर्ताले कैलाली, नवलपरासी र मकवानपुर लगायतका जिल्लामा ट्रक, बस र ट्याक्टरमा समेत आगजनी गरेका छन।त्यसैगरी देशका विभिन्न स्थानमा बम तथा शंकास्पद बस्तुहरु पनि भेटिएका छन् ।
प्रदेश ५ मा बन्दले जनजीवन प्रभावीत भएको छ।प्रदेश ५ मा अन्यको तुलनामा विप्लवको गतिविधि भएको क्षेत्रका रुपमा चिनिन्छ। विहीबार प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका लागि बस छुट्ने बुटवलको लुम्बिनी बस टर्मिनलबाट कुनै सवारी साधन चलेका छैनन् । यस्तै अन्य जिल्लाहरुमा पनि प्रहरीले लामाे दूरीका सवारीलाई स्कर्टिङ गरी गन्तव्यतर्फ पठाएकाे सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरुले बताएका छन्।
बुटवलमा सुतली बम डिस्पोज
बुट्वलमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सुतली बम,सुरक्षाकर्मीद्धारा डिस्पोज।
रुपन्देहीको बुटवलस्थित राजमार्ग चौराह नजिकै फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको छ । बुटवल–भैरहवा सडकखण्डको बुटवल उपमाहानगरपालिका वडा नं ११ स्थित कालिकाचोकमा रहेको ट्राफिक बेरिकेडमाथि भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाले डिस्पोज गरेको हो ।
टोलीले बिहीबार बिहान करिब साढे नौ बजे डिस्पोज गरेको हो । सेनाले डिस्पोज गरेको वस्तु सामान्य बम रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी डिल्लीबहादुर मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दको प्रभाव देखाउन र नागरिकमा त्रास फैलाउन सामान्य सुतली बम राखिएको जानकारी दिए ।
रुपन्देही क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएकाे छ।
प्युठानमा संस्कास्पद बस्तु फेला
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कार्यकर्ता पक्राउको विरोधमा गरेको बन्दका क्रममा प्युठानका दुई स्थानमा संस्कास्पद बस्तु फेला परेको छ ।
प्रहरीले विहान ४ः ३० बजे सडक निगरानीको क्रममा उक्त संकास्पद बस्तु भेट्टाएको थियो । जसलाई नेपाली सेनाको समुहको बम डिस्पोजल टोलीले निस्पोज पारेको बुढाथोकीले जानकारी दिए । बन्दले प्युठानको जनजीवन प्रभावित पारेको छ । प्युठान समाचारदाता राम बहादुर बिश्वकर्माका अनुसार प्युठानमा बन्दको प्रभाव परेको छ। प्युठानमा फेला परेका शंकास्पद बस्तु सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्न राखिएको हो प्रहरीले बताएको छ। ।
बाँकेमा नेपाली सेनाद्वारा बम निष्क्रिय
नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकखण्डको राँझा चोकमा राखिएको केट्ली बम नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ।
बिहानै चोकमा बम राखिएको खबर पाएलगत्तै घटनास्थलमा पुगेको नेपाली सेनाको बम डिष्पोजल टोलीले बम निष्क्रिय पारेको हो।
बम राखेको सूचना पाउने बित्तिकै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले नेपाली सेनालाई जानकारी गराएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिए।
कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा सतर्कता बढाएको उनले जानकारी दिए।
बम राखेको हल्लाले विभिन्न स्थानमा जानका लागि विमानस्थल पुगेका यात्रु, राँझा चोकलगायत आसपासका क्षेत्रमा त्रास फैलिएको थियो।
बन्दका कारण बाँकेमा शिक्षण संस्था बन्द रहेका छन् भने लामो दूरीका सवारीसाधन चलेका छैनन्।
नेपालगञ्जमा छोटो दूरीका सवारीसाधन र पसल व्यवसाय आंशिकरुपमा खुलेका छन्।
सरकारले दुई दिनअघि घोषितरुपमै विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि बम विष्फोटका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन्।
फेसबुकमा देखियाे हालसम्मकै सबैभन्दा खराब समस्या